Global Voices teny Malagasy » Na Eo Aza Ireo Sakana, Mijoro Ho Vehivavy Sy Mpandraharaha Ao Afganistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Na Eo Aza Ireo Sakana, Mijoro Ho Vehivavy Sy Mpandraharaha Ao Afganistana
Voadika ny 02 Janoary 2019 16:00 GMT 1	 · Mpanoratra Ezzatullah Mehrdad Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vaovao Tsara, Vehivavy sy Miralenta
Shukria Attaye, 50 taona, vehivavy afgana mpandraharaha. Sary: Ezzatullah Mehrdad.
Raha toa ny masoandro mody eny amin'ny renirano mampalahelo ao andrefan'i Kaboul, renivohitr'i Afganistana, misy mianadahy manao fanamiana mangamanga fitondra miasa tandalerona, manafangaro sy mamotika vilona mialohan'ny fahatongavan'ny andiany iray vaovao an'ireo ombivavy be ronono.
I Shukria Attaye, 50 taona, sy Mohammad Ali, 55 taona ireo. Tena mifanohitra tanteraka amin'ireo fifanekena any amin'ny firenena iray izay ny andraikitra isaky ny karazana dia tena voafaritra mazava tsara ary voahaja ny maha-zokiolona, i Mohammad Ali no mpikarama amin'i Shukria Attaye anabaviny.
“Mirehareha amin'ny anabaviko aho”, hoy i Mohammad Ali, izay manodidina ny 200 dolara isam-bolana ny karamany ao amin'ilay orinasam-pianakaviana.
“Tany ampiaingana, tsy nihevitra azy hahomby tsara aho. Noeritreretiko fa nanao izay hivelomana fotsiny izy, dia izay ihany.”
Attaye, izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra, no lehiben'iero lehilahy mpiasa telo hafa izay miasa ao an-tokontany. Ny toerany amin'ny maha loham-pianakaviana azy dia azony tamin'ny ady mafy, taorian'ny naha-kilemaina ny vadiny noho ireo fitondrana ratsy nataon'ireo talibàna taminy, ka nahatonga azy tsy ho afaka miasa intsony.
Avy amina fianakaviana sady tsy mahantra no tsy mpanankarena, dimy taona izay no nampihodinany ny fitrandrahana ronono tamina vola latsaky ny 40.000 afghanis (700 dolara amerikana). Ankehitriny izy mitetika ny hampiasa vola amina fanorenana orinasa fanodinana ronono.
“Tsy te-hahita ireo zanako hiasa eny an-dalambe aho”, hoy i Attaye manazava ny fahavitrihany. “Ny fahasahiako, ny hafanampoko ary ny fahatokisako ny tenako no nandrisika ahy hiroso sy hiasa.”
Shukria Attaye mitsangana eo amin'ny tokontany izay hofainy 1.000 dolara isantaona. Sary: Ezzatullah Mehrdad.
Notefeny tao anatin'ny fahoriana ireo toetra maha-mpitantana an-dRamatoa Attaye. Fianakaviana anisan'ny iray tamin'ireo an'arivony nandositra tany Iràna ny fianakaviany tao anatin'ny vanim-potoana nanaraka ny fananiham-bohitra nataon'ny sovietika tamin'ny taona 1979. Tany, nahazo andraikitra iray goavana izy tao amin'ny filankevi-behivavy izay niaraka niasa tamin'ny ONU mikasika ny olan'ireo mpitsoa-ponenana.
Tamin'ny 1996, rehefa nifarana niandalana ireo adin'ny mpirahalahy ary nandray ny fehezana ny firenena ry zareo talibàna, nanolo-kevitra azy ireo ny ONU mba hody any Afganistana ary hiasa ho an'ireo biraon'ny fikambanana ao Hérat, ao andrefan'ny firenena.
Saingy fotoana kely taorian'ny niverenan'ny fianakaviana, nosambori'ireo talibàna tsy nisy fanazavana ny vadiny ary nampijaliana feno habibiana izay nitarika azy harary tany amin'ny fo sy ireo aretina maro samihafa mandra-maty, hoy izy mitantara.
Miezaka ho velona
Nifindra monina tany Kaboul ny fianakaviana ary nanokatra trano fanaovana mofo i Shukria Attaye. Nanapaka ny fifandraisana taminy ny fianakaviam-badiny, tao anatin'ny tahotra ny vadiny ho lasa kilemaina dia hitodika any amin'izy ireo ny fianakaviany mba hanampy azy ireo ara-bola. Nandeha tsara ny trano fanaovana mofo, na izany aza, ary nanomboka nanao varotra fiarakodia sy tany madinika i Attaye.
Saingy arakaraky ny naha-tsy salama ny vadiny – maty izy tamin'ny taona 2016 – toy izay koa ireo tahirim-bola tao an-tokantrano.
Taorian'ireo dia marobe tany India akaiky eo, hanao ireo fanarahamaso ny fitsaboana, “lany ny vola teo am-pelatanako”, hoy ny fitadidiany.
Nasehon'i Attaye tamin'ny Global Voces ny fiakena trosa nataony ho an'ireo sidina fiverenana avy any India tamin'ny taona 2013.
Tamin'io vanim-potoana io indrindra no nanapahan'i Attaye hevitra hirotsaka amin'ny famokarana ronono. Nindrana vola taminà olom-pantatra iray izy ary nividy ombivavy be ronono nitentina 700 dolara. Ny famarotana indray an'ilay ombivavy niaraka tamin'ny tombony no nahafahany nividy an'ireo hafa marobe. Manana ombivavy 25 izy ankehitriny.
Ramatoa Attaye mitsabo ireo ombivavy be rononony. Sary: Ezzatullah Mehrdad.
Manampy ireo vehivavy hafa
Ao Afganistana, any anatin'ireo tontolo marobe, melohina ireo vehivavy miasa. Laïla Haidari, izay mitantana ny fandaharanasa erantany fanta-daza amin'ny fanarenana an'ireo mpiankindoha amin'ny zavamahadomelina Mother Camp, dia milaza fa nampangain'ireo mpitarika fivavahana eo an-toerana ho mpivarotena izy.
Mba hamatsiana vola ny toby, nanokatra toeram-pisakafoanana iray i Haidari tamin'ny taona 2013. Saingy ho an'ny maro tamin'ireo mpanjifany, hadisoana ny hevitra fananganana toeram-pisakafoanana tantanina vehivavy. Matetika izy ireo no mitaky firaisana ara-nofo ho fanampin'ny sakafo sy ny fisotroana, hoy izy mitantara.
Nampiasa ny toerany amin'ny maha-mpandraharaha sy mpitarika ara-tsosialy azy i Haidari mba hizakan'ireo vehivavy hafa tena, ary manohana ara-bola tovovavy miisa 35 sy vehivavy koa izy mba hidiran'izy ireo any amin'ireo lisea sy anjerimanontolo.
“Tsy tetikasa amerikana ny fanomezana fitaovana ho an'ireo vehivavy afgana”, hoy ny nambarany tamin'ny Global Voices amin'ny fanondroana ny fanaratsiana eo an-toerana efa mahazatra, atao an'ireo finiavana sahala amin'ny azy.” “Resaka fanomezana [azy ireo] ny fahavononana sy ny fahasahiana hahatoky tena ilay izy.”
Nanana aingam-panahy hanampy an'ireo hafa ihany koa i Shukria Attaye tato anatin'ireo taona vitsivitsy farany. Mampiantrano vehivavy roa izy amin'izao fotoana izao, ny iray nisara-panambadiana ary ny iray mananontena.
“Arakaraka ny ampiroboroboako ny fitrandrahana famokarana ronono ataoko, no handraisako vehivavy betsaka mila fanampiana”, hoy i Attaye tamin'ny Global Voices.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/02/132329/